Race 3 – Page 3 – Filimside.net
Race 3 oo kaalinta 12-aad ka galay filimada todobaadkooda kowaad lacagaha ugu badan soo xareeyeen
June 22, 2018 Zakarie Abdi
Mega Star Salman Khan filimkiisa Race 3 wuxuu keenay 139 Crore todobaadkiisa kowaad sida shabakada BOI soo daabacday wuxuuna noqday filimka 12-aad ee lacagaha ugu badan todobaadkiisa kowaad soo xareeyo. Sidoo kalena sanadkan 2018 wuxuu […]
Rasmi: Race 3 iyo todobaadkiisa kowaad ganacsiga uu gudaha Hindiya ka sameeyay
Filimka weyn Race 3 ayaa keenay 139 Crore (Trade Figure) todobaadkiisa kowaad sida shabakada BOI soo daabacday waana ganacsi aad u wanaagsan. Balse Race 3 maal maha shaqada ayuu gaabis weyn muujiyay taasi oo culees ku keeni […]
Shabakada Boxoffice India ayaa soo daabacday maqaal ku haboon gaabiska uu dhanka Boxoffice-ka sameeyay filimka Race 3 ayagoo iin kaga dhigeen fariintiisa qayaanada (Thriller Genre) oo waligeed daawadayaasha soo dhaweyn jirin. Maqaalkan xiisaha badan waxaa […]
Race 3 siduu HIT dhameestiran ku noqon karaa oo dooda u dhamaan kartaa?
Filimka Race 3 sheekadiisa diidmo waali ah ayay la kulantay wuxuuna mashruucaan ku fakaday awooda Mega Star Salman Khan iyo xiliga fasaxa Ciidul Fitriga. Race 3 sedexda maalmood ee ugu horeesay wuxuu keenay 101 Crore […]
Rasmi: Race 3 iyo Arbacadiisa kowaad ganacsiga uu sameeyay iyo ceeb kale oo soo baxday!
Mega Star Salman Khan filimkiisa Race 3 ayaa ganacsi wacan sameeyay Arbacadiisa kowaad wuxuuna keenay 8 Crore (Trade Figure) wuxuuna sameeyay hoos u dhac ka yar midkii uu Talaadadii sameeyay. Race 3 haatan mudo lix maalmood ah […]
Bobby Deol”Hadii Race 3 Film Xun Yahay Box-office-ka Ganacisgan Wacan Kama Sameyeen”
Race 3 waxaa la islahaa filmka ugu weyn sanadkaan 2018 ayuu noqon doona balse rajadaas meesha waa kabaxday maadama uu ganacsigiisa noqon doono mid xadidan. Shaki kuma jiro Race 3 inuu noqonaayo film guulestay balse […]
Race 3 maanta arbaco wanaagsan ayay u ahayd iyo ganacsigiisa qiyaasta xili hore
Filimka Race 3 ayaa wadada quman kusoo laabtay kadib markii shalay oo ahayd Talaado filimkan hoos u dhac weyn sameeyay waxaana muqato in maanta oo Arbaco ah Race 3 si wacan isku celiyay. Waxaa laga […]
Suaalihii Kasoo Baxay Filmka Race 3 Iyo Dadkii Daawadeen Oo Ku Jahawareeren Maxay Ka Dhaheen!!
Shabakada Bollywoodlife oo kamid ah shabakadaha arimaha Bollywoodka wax badan ka qoraan ayaa suaalo kooban kasoo qortay filmka Race 3 ee tiyaatarada saaran. Race 3 sheekadiisa waa la dhaliilay midaas shaki kuma jiro balse dadkii […]
Rasmi: Filimka Race 3 oo hoos u dhac muuqdo sameeyay Talaadadiisa kowaad
Filimka weyn Race 3 ayaa hoos u dhacii ugu weynaa sameeyay Talaadadiisa kowaad asigoo 30% ilaa 35% hoos u dhacay ganacsi ahaana wuxuu keenay 9.50 Crore (Trade Figure). Waxaa wacneyd in 25% ilaa 30% hoos u […]
Race 3 oo kuleelka dareemay madaama Talaadadiisa kowaad hoos u dhac muuqdo uu sameeyay!
June 19, 2018 Zakarie Abdi
Sida shabakada BOI soo daabacday filimka Race 3 ayaa dareemay kulaalka Boxoffice-ka markii ugu horeesay asigoo hoos u dhac muuqdo sameeyay Talaadadiisa kowaad. Qiyaasta xili hore waxay muujinee in Race 3 keeni doono maalintiisa shanaad 8 […]